योग र ध्यान सिक्ने उत्तम समय﻿ – prabhab.com योग र ध्यान सिक्ने उत्तम समय﻿ – prabhab.com
योग र ध्यान सिक्ने उत्तम समय﻿
Posted on March 24, 2020 March 24, 2020 /2बर्ष अगाडी / 9825 Viewed
✍️ तेज विनोद
यो समय कोरोनाको हो । अर्थात, यतिबेला सम्पुर्ण विश्व कोरोना रोगको कारणले त्रसित छ । आफ्नै घरको ढोका खोल्दा १० पटक सोच्नुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन, ढोका लगाएपछी साबुन पानीले हात धुनुपर्छ । यो त बानी परिसक्यो । हिजो सम्म कसैलाई भेट्दा गर्लम्म अँगालो हाल्ने हान्छेहरु आज कसैलाई टाढैबाट देख्दा पनि तर्सेर तर्किन्छन् । घरकै सदस्यसँग भाग्नुपर्ने स्थिति छ ।
सायद मानब जीबनकै त्रसित र भयभित समय होला यो । ठूला ठूला युद्धमा बरु घाइतेहरुमाथी करुणा गरिन्छ तर यतिबेला त घाइतेलाई डाक्टरले छुँदा पनि हात कमाउनुपर्ने स्थिति छ । सामान्य मानिस देखि विश्वका मै हुँ भन्ने शासक पनि डरले काँपेका छन् । मान्छेले आफैलाई कति माया गर्दो रहेछ भन्ने कुरा कोरोना भाइरसले सतहमा ल्याएको छ ।
अफिस, विद्यालय, कलकारखाना, उद्योगधन्दा, सार्वजनिक यातायात देखी होटल, रेस्टुरेन्ट र किराना पसल सम्म सबै बन्द छन् । यतिबेला गोलार्धका करिब आधा मान्छे घर भित्र छन् । सबै मान्छे फुर्सिदिला । कोही टिभी हेरेका छन् । कोही फोनमा आफन्त र साथीभाइसँग ब्यस्त छन् । कोहीले पढेका छन् । कोहीले लेखेका छन् । कोहीले सिप सिक्दै छन् । कोहीले अन्तिम स्टाटस भन्दै सामाजिक सन्जाल रंगाएका छन् । अझै भनौं, मृत्युबाट त्रसित छन् ।
हिजो एक जना मित्रसँग भलाकुसारीको क्रममा उनले योग र ध्यान सिक्दै गरेको खुलाए । योग र ध्यान गर्नु सामान्य कुरा रहेनछ । देख्दा सजिलो तर गर्दा साह्रै कठीन । पाँच मिनेट आँखा चिम्म गरेर बस्न जति गाह्रो केही रहेनछ, उनले भने । दश दिन पहिले १५ मिनेट योग र ५ मिनेट ध्यान शुरु गरेका उनले अहिले १ घन्टा योग र १५ मिनेट ध्यान गर्न सक्ने भएछन् ।
मेरा अर्का एक जना मित्र छन् । उनको जाँगर देख्दा म अचम्मित हुन्छु । १५ दिन पहिले घर भित्रै करिब एक किलोमिटर दौड शुरु गरेका उनले आज १० किलोमिटर दौड पुरा गरेछन् । पन्ध्र दिनमा दिनहु १० किलोमिटर दौडिन सिकेछन् । उनीसँगको भलाकुसारिको क्रममा मैले उनलाई सोधेँ, दौडन पनि सिक्नु पर्छ र? उनले भने सिक्नु पर्छ, एक किलोमिटर दौडनु र १० किलोमिटर दौडन सक्नुमा ठूलो भिन्नता छ । अटुट मिहिनेत र ध्यान बिना प्रत्येक दिन १० किलोमिटर दौडिन कठिन हुन्छ । दौडिँनु भनेको खुट्टा चालेर ठाउँ सर्नु मात्रै होइन, यो एउटा ध्यान हो । यसबाट योग हुन्छ । लगनसिलता, आत्मासम्मान मिल्छ । प्रकृतीसँग सामिप्यता बढ्छ । पृ्थ्वीमा भएका तत्वहरुसँग शरिरको संसर्ग हुन्छ । यो एउटा सिकाई हो । कोरोना भाइरसको कारण घरमा बस्दा यो अमुल्य सिप सिक्दै छु । उनले फुर्तीसाथ भने ।
हो नि । चिन्ता लिएर समय व्यतित गर्नु भन्दा बरु शरिरमा उर्जा दिने योग र ध्यान सिक्ने हो भने त गजबै हुँदो रहेछ । हामीलाई लाग्छ ध्यान सिक्नु पर्छ । ध्यान र योग सिक्नको लागी चर्चित योग गुरुकोमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । तर त्यो नै पुर्ण वास्तबिकता त्यो होईन । नियम पुर्बक ध्यान गर्न गुरुकोमा जानु पर्ला । तर शुरवात गर्न, आफ्नो दैनिकी चलाउन गुरुकोमा जानु पर्दैन ।
” खाना खाँदा बाहिरी कुरा नसोची खानाको स्वाद सँग रमाउनु ध्यान हो । गीत सुन्दा शब्द र संगीतसँग एकोहाेरिनु ध्यान हो । स्वास फेर्दा श्वास कसरी बाहिर भित्र गर्छ, भित्र जाने चिसो स्वास र बाहिर निस्किने तातो स्वासलाई महशुस गर्न सक्नु ध्यान हो । हिड्दा खुट्टाको चाल र घुँडाको घर्षण महशुस गर्नु ध्यान हो ।”
हामी जहाँ छौं त्यही ध्यान गर्न सक्छौं । ध्यान गर्नको लागी कुनै पोजिसन हुँदैन । हात घुँडामाथी राखेर चकटीमा बसे मात्रै ध्यान हुन्छ भन्नु पनि भ्रम हो । हामी जे गरेका छौं त्यसलाई मनबाटै निरम्तरता दिनु ध्यान हो । उभिएको मान्छे दिमाग खाली बनाएर उभिइ रहनु ध्यान हो । खाना खाँदा बाहिरी कुरा नसोची खानाको स्वाद सँग रमाउनु ध्यान हो । गीत सुन्दा शब्द र संगीतसँग एकोहाेरिनु ध्यान हो । स्वास फेर्दा श्वास कसरी बाहिर भित्र गर्छ, भित्र जाने चिसो स्वास र बाहिर निस्किने तातो स्वासलाई महशुस गर्न सक्नु ध्यान हो । हिड्दा खुट्टाको चाल र घुँडाको घर्षण महशुस गर्नु ध्यान हो । अहिले नै तपाईँ आफु भएकै पोजिसनमा पाँच मिनेट आँखा चिम्म गरेर आफूले फेरेको स्वास अबलोकन गर्नुस त । स्वास लिनुस, नाक-मुख-घाँटी-छाति-हात-औँला-फेरी छाति-पेट-खुट्टा-खुट्टाका औंला सम्म महशुस गर्नुस । ध्यान भयो नि? यो प्रक्रिया सँधै दोह्रोर्याउनुस ।
खुट्टा पसार्नुस र हातले दश पटक खुट्टाका औँला छुनुस, टाउको निहुराएर घुडा छुने प्रयास गर्नुस, टाउकोलाइ घरी देभ्रे घरी दाहिने घुमाउनुस, कम्मरलाई दश पटक घडी घुम्ने दिशामा घुमाउनुस र फेरी दश पटक उल्टो दिशामा घुमाउनुस । हल्का दौडिनुस । पचास पटक उठबस गर्नुस । पचास पटक उफ्रिनुस ।
त्यस्तै योगको बारेमा पनि हामी भ्रममा छौं । पैसा तिरेर योग गुरुकोमा नगै योग हुँदैन अथवा रामदेवको योगभ्यास टिभीमा नहेरी योग गरिदैन भन्ने धारणा छ हाम्रो । यो पनि ध्यान जस्तै हामी बसेकै ठाउँमा हुन सक्छ । तपाईँ बसेकै ठाउँबाट शुरु गर्नुस, खुट्टा पसार्नुस र हातले दश पटक खुट्टाका औँला छुनुस, टाउको निहुराएर घुडा छुने प्रयास गर्नुस, टाउकोलाइ घरी देभ्रे घरी दाहिने घुमाउनुस, कम्मरलाई दश पटक घडी घुम्ने दिशामा घुमाउनुस र फेरी दश पटक उल्टो दिशामा घुमाउनुस । हल्का दौडिनुस । पचास पटक उठबस गर्नुस । पचास पटक उफ्रिनुस । अब एकछिन आँखा चिम्म गरेर भुँइमा पल्टिनुस । यो प्रक्रियालाई दिनदिनै दोह्रोर्याउनुस र आफ्ना नयाँ नयाँ तरिकाहरु अपनाउनुस योग यही हो ।
रोग लाग्छ होला । मरिन्छ होला । के भएको हो यस्तो? भन्दै चिन्ता र नकरात्मक सोच लिएर आत्मबल घटाउनु भन्दा समयको सदुपयोग गर्दै नयाँ सिप, ध्यान र योग सिकेर सकरात्मक सोच, फुर्तिलो शरिर बनाएको बेश । आजैबाट शुरु गरौं । शुरु गर्न गाह्रो छ, अनि बानी पार्न झन गाह्रो छ । एक पटक बानी पार्न सकियो भने मज्जै बेग्लै। यो खाली समयको सदुपयोग गरौं है ।
ह्याप्पी कोरोना टाईम ।
सबै स्वस्थ, मस्त र सुरक्षित रहौं ।🙏